Asaramanitra feno hafaliana hoan’ny fianakaviam-ben’ny MTM |
Amin’izao fankalazana ny asaramanitra izao, ny Minisitry ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetrandro Beboarimisa Ralava dia tonga naneho sy nizara hafaliana niaraka tamin’ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon’ny Ministera izay hiadidiany.
Nandritra izany dia nisy ny fizarana vary 1 gony, menaka 1 litatra, siramamy 1 kilao.
Nisy ny laha-teny izay nataon’Andriamatoa Ministra, ka nanehoany ny fankasitrahana sy fisaorana feno hoan’ny fianakaviam-ben’ny Ministeran’ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetrandro noho ireo ezaka maro izay natao teo amin’ny sehatra arak’asa isan-tsokajiny.
Nidera manokana ihany koa ny firaisankinan’ireo mpiara-miasa ny tenany teo amin’ny fanatanterahana ireo lalao ara-panatanjahantena samihafa izay nandraisan’ny MTM anjara, sy ireo lanonana sy fitsangatsanganana izay natao.
Teo am-pamaranana ny lahateniny dia nirary soa ho an’ireo ankohonana tsirairay ihany koa izy mba hanao fetin’ny krismasy sambatra sy handray am-pifaliana ny taona vaovao 2019.
Previous : Célébration de la journée de l’Aviation Civile Internationale